असफल प्रेमी सलमान खानका १० चर्चित प्रेमिका, कस्तो रह्यो सबैसंग को सम्बन्ध? जुन तपाईलाई थाहा नहुन पनि सक्छ! – ZoomNP
असफल प्रेमी सलमान खानका १० चर्चित प्रेमिका, कस्तो रह्यो सबैसंग को सम्बन्ध? जुन तपाईलाई थाहा नहुन पनि सक्छ! प्रकाशित मिति: शुक्रवार, भाद्र १०, २०७३ समय - १५:३०:५० सलमान खानको जीवनमा धेरै युवतीहरुको प्रवेश भयो । तर, छोटो समयमा नै ती सम्बन्धहरु टुटे । कति युवतीप्रति सलमान खानको ठुलो लगाव रहेको थियो भने केही युवतीहरु सलमान भनेसी मरिहत्ते गर्थे । सलमान खान अझै पनि अविवाहित नै रहेका छन् ।
उनको विवाहका विषयका कारण मिडियामा ठुलो चर्चा आज पनि उत्तिकै हुने गर्छ । उनको युवतीहरुको सम्बन्धलाई लिएर पनि मिडियाका विषय बन्ने गर्छन् । कतिले त उनलाई भर्जिन समेत भन्ने गर्छन् । तर, उनलाई फिल्ममा सफलता पाउनका लागि युवतीहरुले प्रयोग गर्ने समेत गरेको केही फिल्म विश्लेषकहरु बताउने गर्छन् ।
उनी बलिउड फिल्ममा सफलता पाउन सिंगनलै भएजस्तो पनि गर्छन् । उनका जीवनमा आएका १० युवतीहरु, केही युवतीहरु बलिउडका चर्चीत अभिनेत्रीहरु समेत रहेका छन् ।